Indlela yokunciphisa izinga lokuhlawula kwiSayithi lakho lePressPress - ITS Techschool
Ngethuba elithile lokuba sinalo idola rhoqo xa umntu uthe okanye ebuza umbuzo malunga nezinga lokuxhamla, siya kuba zii-tycoons. Oko kukuthi, into eninzi ityhiweyo, yaqulunqwa kwaye yafumana ingcaciso malunga nale "yerhamncwa" yomsebenzi weetrikri ebonakala ngathiyikisayo enye kunye.
Kwinqanaba xa iBalace Rate ifanele ikukhathaze
Kutheni Ukunciphisa iRhafu kwiSiza sakho seSpressPress
Nciphisa iRhafu yeBounce kwiSayithi lakho lePressPress
Isilinganiselo seBounce nguMetric Satrifaction Metric
Iingcono zokuguqula amaxabiso
I-High Bounce Rate i-Bad for WordPress SEO
Ukunciphisa iRhafu kwiSayithi lakho lePressPress
Gxininisa iSithuthi sakho
Ukuphuculwa kweSayithi lakho lePressPress
Ukuphucula i-WordPress Site Navigation
Ukuphucula umxholo wakho wokunciphisa izinga lokuhlawula
Ukuphucula i-SEO yakho kunye ne-PPC
Isilinganiselo seBounce kunye nokuQhagamshelana
Hlanganisa izixhumanisi ezihlukileyo
Faka iifayili ezihambelanayo
Kwimeko nayiphi na into, mhlawumbi ngenxa yokokuba abaninzi abantu abathintekayo xa isantya sokuhlawula sichazwe ngokuqhelekileyo asinayo ingcamango engapheliyo malunga nento eyaziwayo, okanye mhlawumbi nayiphi na enye imetrikhi ukwenzela ukuba . Ubulungiseleli ukukhwabanisa okuhlala kwiwebhu. Kuyamangalisa njengoko kuphazamisayo.
Nantsi intsingiselo yenyaniso nangona kunjalo: izinga le-Bounce lingumlinganiselo wabantu abashiya indawo yakho ngaphandle kokuphonononga naluphi na iphepha ngaphandle kwephepha lephepha. Ukuxhalabisa kakhulu? Sifanele siphakamise isikhombiso semfihlo kwisidalwa esibizwa ngokuba yizinga lokuhlawula ixesha lokugqibela.
Kuthe sithatha i-prospects ye-WordPress "kwi-Google," kwaye isayithi lakho liphuma phakathi kokuqala kokuqala (i-10) ivela ngokubhekiselele ekuqinisweni ukuba uthathe emva kwee-WordPress SEO ezifanelekileyo. Ukusukela ekubeni ucinga ukuba "Indlela yokukhetha i-Perfect WordPress Consultant" njengamanje ubheka umbulelo ongaqhelekanga kwiimeta ezibonisa ukuba uqinisekisile iGoogle, baya ku-site yakho. Oku kungena kweblogi kukujika kwiphepha lakho lephepha, okanye "icandelo" nje.
Kukho nawuphi na, xa befika kwisayithi yakho, bakufumanisa ngokukhawuleza ukuba awunjalo oko babelindele, ngoko bawabamba emva, babone enye i-URL okanye baphonsa i-PC yabo kwifestile. Lo msebenzi olula wokushiya iphepha lokuhamba ngaphandle kokudibanisa nantoni na eseleyo kwiwebhusayithi yakho iyaziwa njenge-bounce.
Xa ulandelela le mivuzo emva kwexesha elithile, kwaye emva koko uwahlule kunye nenani elipheleleyo labantu abaya kwisiza sakho, ufumana inxalenye. Yenza ukutolika kwesahluko kumyinge kwaye ube nezinga lokuhlawula.
Vumela le nxalenye yezibalo ukuba ungene ngaphakathi. Nantsi inkcazo ye-snappy ukubonisa ngokucacileyo imbono, Cinga ukuba umcebisi wakho we-WordPress umcebisi ufumane iindwendwe ze-1,000, kwaye i-750 isele kwangoko emva kokuphononongwa kwithuba, isantya sakho siza kuba:
750 / 1000 = 0.75 = 75%; Izinga lokuxhamla = Iibheno / abavakatyeliweyo abaqingqiweyo x 100%
Kwinqanaba xa i-Rate Bounce yakho ifanele ikukhathaze
Ekubeni sinawo "yintoni" emgwaqweni onqabileyo, xa kufuneka ukunyanzeliswa kwezinga lakho? Ngexa ndenza ujikelezo lwam, ndihamba ngaphaya kwe-infograph kaNeil Patel eyayineengqikithi zemiqobo yee-bounce rates. Ukugqiba i-rundown iinguqu zeewebhu kunye namazinga e-bounce ephakamileyo njenge-98%, elandelwa ngamaphepha okubulisa kwi-70-90% kunye neendawo zendawo kwi-40-60%. Iziza zenkcubeko ziza ku-30 - isiqingatha, zilandelwa ziindawo zentengiso kwi-20-40% kwaye zilandelwa ziindawo zokulawula kwi-10-30%.
Ngokubanzi, kufuneka ugxininiswe ukuba i-WordPress yakho yezinga lokunciphisa i-60%. Ngaphantsi kwesiqingatha sikhulu, nangona kwenzeka ukuba ungabhawula phantsi kwe-10%, unobulumko. Zama ukungafikisi ukuqonda, kodwa kufuneka ulinganise (okanye ucinge ngako) ngezinga lakho lokunciphisa imibukiso yakho ebhaliweyo.
Ngokomzekelo, kwithuba elide lokuba sele ubhalisile izinga lokuxhamla kwe-95%, kodwa ke ke waletha phantsi kwi-65% ekuhambeni kweendlela zokubuyisela izinto, umzekelo, abo siza kululoba namhlanje, kufuneka uphumelele kuba oko kuyitshintsho elingaqhelekanga, nangona kungaphezulu kwe-60%.
Okwangoku, ufanele ukhumbule ukuba kukho iindidi zeendawo ze-WordPress, kunye nezo zinto, eziza kuba nezindleko eziphezulu eziphezulu njengento. Umzekeliso ohloniphekileyo isayithi le-WordPress yekhasi elilodwa. Iimeko zezinto eziza kuba nezinga eliphezulu lokuhlawula ixabiso elibongiweyo liphepha lokubulela elingahambi kwezinye iphepha. IiSayithi, umzekelo, iikhompyutheni zegama le-intanethi nazo zinokuba nezindleko eziphezulu, kuba abathengi njengomthetho abakacacanga kwiphepha eliqulethe inkcazelo abayifunayo.
Khumbula zonke ezi zinto zicinge ngelixa ucinga ngesantya sakho. Kwimeko nayiphi na imeko, kuzo zonke izizathu kunye nenjongo, i-60% yinqanaba lethu lokunciphisa. Ngaphezulu koko, usemngciphekweni. 40 - 60% usinda, 10 - 40% wenza kakuhle, kwaye <10%, ufanele umhlobiso.
Siphephe ngokuqinisekileyo oko kwaye nini. Kukho nawuphi na, kutheni kungaba yinto efanelekileyo ukuba uzame ukutshulwa kwinqanaba eliphezulu? Kutheni kubalulekile ukuba uqhubeke nezinga eliphantsi elingenakulinganiswa? Ndiza kukhawuleza, ngoko sinokufikelela kumalungiselelo njengokuba ngoku.
Ungabonakalisa isayithi ngezinga eliphezulu lokuhlawula, kwaye ndiya kukubonisa isayithi ngabaxumi abadaniweyo. Ngaphandle kwendawo yekhasi elilodwa, izithenjwa zegama le-intanethi, i-Million Dollar Homepage ne-al, nayiphi na indawo enezinga eliphezulu lokunciphisa i-intanethi ifana nokuxhatshazwa kwabathengi abampofu.
Ngethuba lokuba ithuba lokunciphisa liphantsi, ufezekisa into efanelekileyo, kwaye ufanele ufezekise inani elithile lento oyenzayo. Kwimeko apho iphakame kakhulu, kufuneka ufumane ikhaya lakho ndawonye ngenxa yokuba ukubandakanyeka komthengi ongcono kusebenza njengeyunithi engenakulinganiswa kunye ...
Ngenxa yokuba uya kuzuza ngendawo yakho ye-WordPress, kufuneka uguqulwe kwiindwendwe ezingabalulekanga kwiindwendwe zesintu, abathengi okanye abathengi abathembekileyo. Uya kuba nexesha elixakekisayo ukufezekisa oku xa abantu bengabambeleli ukujongana naluphi na uhlala kwindawo yakho. Kwimeko apho bonke abantu abazenzayo kumaphepha akho okubonisa uboniswa, ulahlekelwe ngokusemthethweni kulwa.
Ufuna amathemba akho ukuba azixhamle kunye nokucebisa ukuba uthathe amanyathelo xa uhlawula iindleko. Izinga eliphantsi lokuhlawula ngokuqinisekileyo abantu abanasayishiya isayithi yakho bafika ngokukhawuleza. Ulwahlukileyo luhlala luqhubeka.
Qaphela: Unokuba nezinga eliphezulu lokuhlawula kunye neenguqu ezintle zokutshintsha.
Ityala elifanelekileyo liyiziko leWePress page elilodwa elicela ukuba amathemba abize kuwe. Kwimeko apho abantu be-1000 bafika kwiphepha, kwaye i-800 ikubizile, uhlawula i-80% yokutshintsha kwezinga ngokungakhathaliseki ukuba kungenzeka ukuba izinga lakho lokunciphisa i-100%.
Enye ityala: Masithi awusayi kuthumela into yakho, kwaye ekupheleni kwiphepha lakho lempcazo, uquka ukudibanisa kwiirekhodi zokunxibelelana kweewebhu zentlalo ukukhulisa iqela. Unokuphucula ukuphuhlisa iqela lakho kungakhathaliseki ukuba inokwenzeka ukuba indawo yakho ibhala izinga eliphezulu.
Yiba nokuba kunjalo, ukuba i-CTA yakho ifaka ukuthabatheka kwelinye ikhasi kwiziko lakho (umz. Sicelo okanye umgangatho wesivumelwano), awukwazi ukuba nezinga eliphezulu lokutshintsha ngezinga eliphezulu lokunciphisa. Aba babini abakwazi ukuhamba kunye - isitayela somlilo namanzi.
Kubuphi ubude bexesha apho umxhasi asebenzisana nekhasi lakho nakweyiphi na indlela enqwenela ngayo, unenguqu. Ngethuba lokushiya ngaphandle kokubambisana nantoni eseleyo kumakhasi akho axhunyiwe, uya kuba nezinga eliphezulu lokunciphisa. Ukuqhubela phambili ...
BAM! Nantsi into emele ibonakale ngokwaneleyo ukuze iphawulwe. Intoni? Abantu bayayeka konke abakwenzayo kwaye bagxininise xa ucacisa i-SEO. Oko kungenxa ye, kakuhle, ngaphandle kwenkohlakalo "yamahhala" evela kwi-web crawlers, zithini iinguqu zenguqu kunye nokubandakanyeka kwabaxhasi?
Vumela, unokufumana nje ukuhamba ukusuka kwimithombo eyahlukeneyo, nangona kwenzeka ukuba awuxhaphazi i-SEO, uvakalelwa kukuba ulahlekelwe yinkampani enkulu. Ngokwenene ushiya imali kwitafile.
Kutheni kunjalo? Okokuqala, imibutho ekhompyutheni ininzi ithola inqwaba yezenzo ezivela kwiwebhu. Kucacile ukuba ungakhetha ukulibaleka. Ngaphandle koko, uluntu jikelele olwenza amalungiselelo ngokusebenzisa izixhobo zokukhangela kwiwebhu zizona zithengwa ngabathengi. Ngoko ngokuqinisekileyo, i-SEO i-thaaat ibalulekile. Ukongezelela, ukulinganisa amazinga aphezulu ekuhlaleni akuyona indlela owakha ngayo iprojekthi ye-SEO eqinile.
Le yindlela indlela inambuzane zeGoogle eziguqulela ngayo amazinga aphezulu ahlawulayo: Abantu bashiya indawo yakho ngokukhawuleza bafikelele ekuboneni ukuba awubalulekile. Awuniki naluphi na ixabiso, ngoko awufanelekanga ukubeka indawo ye-SEO. Zonke izinto ezicatshangelwayo, indawo yakho ye-WordPress ifakwe emva, kwaye inkcaso yakho ithatha isikhundla sakho, kunye nomsebenzi. Isantya esiphezulu sezinga eliyingozi kakhulu ngokwenene.
Sinokumisela kuqala. Okwangoku kufuneka siqhube. Ngethuba linye lithenda, uya kugqithisa isantya esiphezulu se-bounce esiye sishiya ngaphandle kwesitalato sakho ukuphumelela kwe-intanethi. Ngaphambi kokuba siqhube phambili, ndiya kukukhuthaza ukuba usebenzise ezi zicebiso ngokukhawuleza, ungazifundeli nje. Umsebenzi olula, kwaye ekubeni sisenza umsebenzi wakho we-WordPress ukhuthaze, kufuneka ube namaxesha amahle ngeli xesha. Ngokukhawuleza, apha siya ...
[Ukufunda yethu ithrafikhi] kusinikeza izinto ezibalulekileyo zolwazi eziqhuba ukuqhubela phambili kwento yethu kwisicelo sethu kunye nedeskithophu yethu. Ibonisa ngokucacileyo indlela abantu basebenzisa ngayo into yethu kwinqanaba ngalinye. - UJeffrey Fluhr, i-CEO iSpreeCast
Ingoyifutshane kwaye iyinde? Uza kunciphisa njani izinga lokuhlawula kwi-WordPress site yakho kwithuba lokungazi ukuba yintoni umcimbi okhoyo? Uphando oluncinane luya kunceda ekusekeni ngokuchanekileyo ukuba kutheni ukuba ulandele i-graph-bounce rates.
Mhlawumbi uthabatha kwiintshukumo ezivela eChina kodwa igama lakho lobudlelwane kunye nezinto zichazwe ngabaphangi base-USA. Mhlawumbi iimfuno zakho azizilungelelanisi abo bakhohlisayo. Ingaba i-bounce yakho ephakamileyo iboniswe kwiindwendwe ezintsha okanye ezibuya? Mhlawumbi yinto entsha; indawo yakho ye-disillusions abathengi abaphathekayo.
Kungaba nantoni na. Isilinganiselo sakho sokuphakama esiphakamileyo singakulungisela ubuncinane ubuncwane omnye, nangona awusoze wazi ngaphandle kokuba ugxininise umsebenzi wakho. Ngenxa yoko, ufuna i-device yeemviwo, umzekelo, i-Google Analytics, i-Piwik, i-Crazy Egg, iClicky kunye ne-Web Trends ukutsho nje isibini.
Cinga yonke into ukusuka kwintlalo yoluntu kwimimandla yomhlaba, ukuziphatha kwabaxhasi, kunye neendwendwe zethendi zisebenzise phakathi kwemilinganiselo eyahlukeneyo. Phanda yonke into ekhoyo kulolu hambo - kufuneka ufumane yonke ingcaciso malunga nomsebenzi wakho kwiminwe yakho. Yiloo nto umfundisi wam Khemisti asetshenziselwa ukuba asixelele-zinezinto kwizandla zakho, okanye uye ekhaya kwaye ukhethe kwi-polytechnic. Haha, iimeko ezindala.
Ngomzuzu, kuthiwani ngokudlala umdlalo wethu ngokuthanda ngokupheleleyo. Cinga ukuba ukhangele imoto ye-Audi yakutshanje. I-dark glossy Audi A4 ibe yinto echanekileyo. Ukujonga ngokufanayo umphumo oyintloko kwi-Google ayikho indawo ye-Audi eyinyani, ekubeni loo ntsana inamathela ngokukhawuleza.
Uxhomekeke ngokwenene ukuqhuba loo monster phantsi kwe drive yakho ngeli xesha ngeveki enye ukususela ngoku. Ngoko uya ku-Google, khangela i-Audi A4, kunye nethuba kwi "newcars15.com" ethatha ixesha elingapheliyo, kunye nohambo olujikelezayo kwindalo yonke. Ngaba unamathela okanye uchithe imali yakho ye-30,000 bucks kwenye indawo? Ndiyazi ukuba andiyi kubamba, ngenxa yokuba iindawo ezinokulinganisela zinokukrazula ubomi ngaphandle kwakho.
Cinga ngenye yale mizuzu ixabisekileyo. Ngaphezulu koko, yiyiphi isiqinisekiso esiya kuthi ufumane i-Audi A4 yakho ngeveki enye ukususela ngoku ukusuka kwii-newcars15.com ukuba isayithi ithatha ngokungunaphakade ukubeka? Vumela, ndiyakuthatha kakhulu, kodwa ke ngenxa yokuba ndicinga ngetoni ukuba ufumene ingongoma, yimeko yethu imeko: Isayithi elincinci liya kuba nethemba eliphefumlelweyo lokubetha umva ngokukhawuleza kunokubona oko kuveza. Sifumene le ngxaki ngokubanzi ekunokunciphisa i-WordPress Yakho yexesha lokuLawula ixesha, ngoko andiyi kuluhlula kumanqaku anomdla.
Sinalo mntwana kwizixhobo ezinhlanu njengamanje, kwaye asiyikubethelela. Indlela ye-WordPress yendlela, njani le ngxaki ephantsi? I siseko; Isikhokelo sendlela esesabekayo sifana nesikhokelo (okanye uphawu lwezandla) olukhokela abathengi kwiziko lakho.
UMary Jane uya kwiGoogle ngesibonelelo sokufumana isifundo esiphendulweyo se-WordPress-based business. Ngenxa yenani elikhulu lezenzo ozifakile ekwenzeni umxholo weblogi ebangalisayo, i-20 Best Responsive WordPress Themes kwi-2015 "yokuposa ibonakala kuqala kwiGoogle, kwaye iyahamba.
Utshabalalisa lonke iposi, kwaye ngenxa yokuzikhandla, ukhetha ukujonga iphepha lakho leencwadi ze-WordPress ukuba angakwazi ukufikelela ngokufanelekileyo kwi-header yakho, kumgca wecala okanye kumamenyu okuhamba ngeenyawo. Kungakhathaliseki ukuba akunakuthi angathengi naziphi na izihloko zakho, akayi kuqwalaselwa.
Okwangoku ujonge uMary Jane. Cinga ngoJohn Doe owazifumanisa indawo yakho (nangayiphi na indlela) kwaye ufuna ukufumana idatha ethile. Kulula kangakanani ukuba uJohn Doe athole okuqukethwe kwiziko lakho ngokusebenzisa isakhelo sakho sendlela? Ngaba ucinga ukuba uya kubambelela kwimeko apho engakwazi ukufumana oko akufunayo?
Isikhokelo sendlela esona sikhulu kunzima ukuyisebenzisa. Kuyisisiseko kwaye kucacile, oku kundinceda ndiyikhumbule eli xesha ndifuna iJava yokufundisa. Ngoko ke ndafika kule ndawo ehloniphekileyo ngumbutho osemthethweni (akukho gama litshona, akukho squealing).
Isayithi likhangeleke ngokungavamile - umgca wolwazi kunye nemisebenzi. Ndixubusha uhlobo lwesayithi onokuzithemba ngokwaneleyo ukukhetha njengento engaphantsi. Kwimeko nayiphi na, oko kwakungaphambi kokuba ndibe nesigxina ekufikeleleni kwi-Java yokufundisa ngokukhululeka okumele iguqulwe phantsi, uyazi, iyafana nam.
Ibali elifutshane elifutshane, umyalelo wokufundisa wawunamanqanaba ambalwa kwimenyu ephezulu, kwaye ndathatha ixesha elininzi njengoko kuyadingeka ngenxa yokuba ndikhululekileyo ngesigulane, kwaye ndandifuna ukufumana umyalelo osemthethweni weJava ukusetyenziswa. Kwimeko nayiphi na into, ndandidandathekile ngokumba ngokudlula phantsi kwamadoda ukuze ndifumane ikhondo elizimeleyo, elingazange lenze ibakala malunga neminqweno yam yonke into ebonwa ngayo. Meh. Ukuphela kwetrade.
Umntu oqhekeza ngokwenene akayi kuba namandla okwaneleyo ukujonga indlela yakho yonke yezinto ezifunekayo ngokwenene. Yenza nayiphi na into ebalulekileyo elula kakhulu ukuyifumana ngendlela yesakhelo sendlela, kwaye ngokuqinisekileyo ixabiso lakho liya kuhla. Ngaba ndiza kuwe? Nantsi i-takeaway:
Yenza indlela eqondekileyo, ngqo
Amamenyu amakhulu akhangeleka, kodwa ngaba ufuna ngokwenene?
Yongeza i-sitem kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress. Ungasebenzisa iimodyuli, ngokomzekelo, i-Google XML Sitemaps okanye usebenzise isihloko sokuba izibonelelo ze-backemaps
Yongeza amamenyu endlela kwintloko yakho, unyawo kunye nebarbar yangasese
Faka iiklasi, iifayile kunye nealebula kwibar yecala
Hlanganisa ibhokisi ekulandelelweyo njengegadget yokukhusela kufuneka imenyu yakho iwele phantsi. Ibhokisi lakho lokuphanda liyakwazi ukwandisa isakhelo sendlela kunye nokuhlangana kwabaxumi. Sebenzisa umodyuli, umzekelo, iRelevanssi ukwenza i-intanethi eqinileyo kunye ne-intanethi kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress
Xa uya kwindawo yokuthenga, ngaba uchitha ixesha lakho kwiivenkile ezinikezela iintambo ezihluphekileyo okanye ezingenangqungquthela? Ndiyagqithisa wena, ngaphandle kokuba ungumnikazi weso sitye, onokuyondla ngokungathandabuzekiyo.
I-substance ephosakeleyo izakuthumela abalahlekisi bakho ngokugqithiseleyo kunokuba ungayithatha. Ndixelele, ngaba usenokuthi uza kutyhala amandla angundoqo usebenzisa i-substance ephosakeleyo xa kukho iintlobo ezininzi zezinto ezonwabileyo zokwenza kwiwebhu? Uyazi, njengeCheezburger, ukuhlaziya i-feline rekodi kwi-YouTube, kunye nokukhetha phakathi kwabanye. Yintoni eyenza izinto ezimbi?
Inkunkuma ye-Stale - Nceda ugcine uphinde ulungiswe
Ukucwangciswa ngokungalungele kunye nokuqikelelwa kwemifanekiso - Enye imifanekiso yecandelo ngu-660px ububanzi, oku kulandelayo ngu-350px
Ukukopishwa komxholo - kuquka imifanekiso. Imali yemali-mboleko kumnini-propati, kwaye ungalokothi uphinde uphinde uphinde usebenzise izixhobo. Akuvumelekanga.
Yenza uphinde uhlele imveliso yakho kwiimeko zokubhaliweyo kweblogi ezijongene neentlobo kunye neendlela ezahlukeneyo ezingenangqiqo zilula
Kwakhona, uzame ukuphucula ukuhlaziywa komxholo kwiblogi yakho ye-WordPress. Into ehlakaniphile iya kubongoza abantu ukuba bahambe kumaphepha axhunyiwe
Izihloko kunye nezihloko eziphantsi
Izitayela zetekisi ezinkulu
Ukwahlukana okwedlula okwexeshana okucatshangelwayo kwamehlo (bambelele kwiiplani ezimbini ze-shading)
Uninzi lwebala elimhlophe
Umxholo wolwazi olungaphezulu
Ngethuba usebenzisa ii-WordPress zebloki ezifakiwe, zibandakanya ukuhlelwa kunye neelayibhile, ngokunjalo abaphangi bangakwazi ukufumana amaphupha ahambelana nokuqhubela phambili. Gcina ingqondo ukugcina iblogi yakho iphinda ihlaziywe kunye nempahla yamuva nje kuba iqinisa ukuzinikela kwabaxhasi kunye ne-SEO.
Ngaphezu koko, kubonakalisa iqela lakho lesithakazelo ekujoliswe kuyo ukuqala ukuqinisekisa ukuba ugxininise ekuhlanganiseni ngokufanelekileyo abantu. Ngenye indlela, uya kubeka amehlo akho ngokubanzi, uya ku futshane kwaye ubambelele kule mivuzo.
Zonke iinzame zokwehliswa kwezinga kwi-WordPress site yakho aziyi kuba nantoni na ithuba lokuba ugxininise ekuhlanganiseni ukungalunganga kwabantu nangaliphi na imeko. Ukuba ngaba kwenzeka ngandlela-thile ukwabelana ngamabakala malunga nendawo endikhulile kuyo, iMeru, eKenya, ndiza kusebenzisa amacebo angasondeleyo e-SEO afumanekayo ukuba ndiqinisekise ukuba andiyi kutsala abantu abaphanga iMat. Meru eTanzania umzekelo. Ubungakanani ndingathanda ukungazakheli kwiingcali zokufuna iitekisi zaseMeru eIndiya okanye abathengi abafuna i-Meru Networks e-Tampa, FL.
Ngethuba elide lokuba ndiyifake kuwo wonke umntu ngaphandle kobonke abantu abanomdla ngokwenene kwindawo ndaye ndakhula ngayo, indawo yam ye-WordPress iya kubhalisa amazinga amanqanaba aphakamileyo-konke kuba ndigxile kubaphulaphuli ababi.
Efanayo iya kwi-PPC yakho yokukhuthaza. Ngethuba lokufumana ukuba ugxile kwizinto ezingalunganga, uya kuhlawula ukuze udwebe kuyo yonke into ngaphandle kwentshukumo oyifunayo. I-SEO yakho kunye ne-PPC imikhosi kufuneka ikhokelwe yi-catchphrase enobuqili. Sebenzisa i-watchword ukubuza malunga namadivayisi, umzekelo, i-Google AdWords yegama elingundoqo igama, i-Word Tracker, i-Yoast Suggests kunye ne-KWFinder.com kwabanye.
Zama ukungafungi ngamaphuzu anomdla, kodwa sibuyele emva kwakho ngala maSebenzi aSebenzi aphezulu e-WordPress ye-2015 kunye ne-Beyond. Kwakhona, qinisekisa ukuba uhlala kwindawo ephezulu kuyo yonke imimiselo yakho egqityiweyo umz.
Ngokumalunga nokuhlawula ixabiso, kukho ubuninzi bezinto onokuzenza ukuze ulungelelanise ukudibanisa kwakho kwaye ufumane indawo yakho ifanelekile njengesiqhwenga. Ukulungelelanisa uqhagamshelwano oluphukileyo, ukwandisa isicwangciso sakho sokudibanisa kunye nokuvula ukungena kwangaphandle kwiithebhu kuyindlela engavamile yokuqalisa.
Esinye isivakalisi sinokufikelela kwiwebhsayithi yakho ngephepha lewebhu okanye ngeposi. Kwimeko nayiphi na into, ukuba uxhulumano oluphukileyo lukhupha indawo yakho ye-WordPress, amava akho akasoze athola idatha ayifunayo, kwaye ngoko ke, ukubetha i-back catch. Ngethuba elithile lokuba baqhubeke bebetha i-back catch, uya kubhala ixabiso eliphezulu lokukhupha isinqumo esilula.
Unokujonga indawo yakho ye-WordPress ukuxhamla ukuxhumeka usebenzisa isimodyuli, umzekelo, i-Broken Link Checker. Kungcono, ungasebenzisa ulawulo lwe-intanethi, umzekelo, i-W3C Link Checker. Eyona nto ikulungele ukulungelelanisa zonke iinkcukacha zakho eziphukileyo kwi-bat ukuyeka ukuqhuma ngaphambi kokuba kwenzeke.
Nangona kunjalo, yintoni omele uyenze xa uxhumano luphela ngexesha langokuhlwa ngenxa yokunyuka okanye esinye isizathu? Enyanisweni, oko kulula - unokukwazi ukujongana nale ngxaki okanye ngokwenza amaphepha e-404 angokwezifiso okanye ukuphazamisa uxhulumaniso oluphukileyo kwi-asethi efunayo, umzekelo, ungumxholo wephepha okanye nayiphi na iphepha elithandayo.
Nantsi indlela yokwenza i-404 ikhasi langokwezifiso kwi-WordPress kwaye nantsi i-301 elula yokubuyisela imodyuli yokuncedisa ukushishina ishishini.
Ukubona isantya se-bounce kwisantya seendwendwe ezithintela kwiphepha lephepha, ukongeza ukudibanisa okubonakalayo kwii-asethi ezinokungabongoza zingabhenela ezinye iindwendwe ukuze ucofe phambili kwiphepha lokuqala. Ngethuba lokungena kweblogi ebangelisayo ukuba izibonelelo zakho zenza, zixhuma kumaphepha akho ahlukeneyo, amanqaku okufika afakwe.
Ithemba elingazange lilungele ukubamba umgibe kwiphepha lakho lokubulisa lingadinga ukuphanda isayithi lakho likhuthaze. Ukuxhuma kwiimpahla ezifanelekileyo kwenza kube lula kumathemba athile. Xa behamba, iqondo lakho lokuhlawula liyahla.
Vula izixhumanisi zangaphandle kwiiTebs ezintsha
Ngaphambi kokukhethwa ngokukhethiweyo kwaba yinyaniso, ukuvula ngaphandle kokudibanisa kwiifestile ezintsha kwakungavumelekanga ngabaxhasi ekubeni ixhomekeke kumhlangano wabaxumi. Yiba nokuba kunjalo, ekubeni ukhethwa ngokusetyenzwa, ukususa iwebhu ngeendawo eziliqela lonke ixesha elivulekileyo limele libe lula ngokulula, kwaye lidibanise.
Namhlanje, akufanele unganqikazi ukuvula yonke into ngaphandle kokuxhunywa kwiithebhu ezintsha, ngaphandle kokuba ngokucacileyo, abaxhasi bakho bavuma iinkqubo ezindala ezingaqinisekisi iithebhu. Ukuvula ukuxhumeka kwangaphandle kwiithebhu ezitsha kubangela ukuhlawula amanqanaba kwi-WordPress site yakho?
Mxelele wenze i-blog enkulu yokungena, kwaye uqhagamshele kwiimpahla ezikhoyo kwisayithi elingaphandle. Kwimeko apho ezi ntambo zangaphandle zivuliwe kwiprogram yeefestile / ithebhu efanayo, iinombolo zeprogram zesayensi eziphumayo. Yiba njengoko kunjalo, kwithuba elivulekileyo lokuba uvule ukuxhumeka kwangaphandle kwiibhloko ezitsha, umqhubi wakho unokufikelela kwi-asethi yangaphandle ngaphandle kokushiya isayithi lakho. Nangona kubandakanywa ukuxhumeka kwangaphandle, phawula "Uxhumano oluvulekileyo kwelinye iwindi / ithebhu" ibhokisi yokukhangela njengoko kuboniswe ngolu hlobo:
Ukuhlaziya iSayithi lakho lePressPress
Ukumxhaphaza kwam apha: Ngaba unamathele (kwaye usebenze) nesayithi ebonakala ngathi yayisebenza ngumbini wesihlanu? Kwimeko apho isayithi lakho lingcono kunokuba likhangele iqondo eliqhelekileyo, awukwazi ukulindela ukuba abantu baya kubambelela ngokukhawuleza ukuthenga oko kunikezelwayo.
Beka izibonelelo kwisifundo esicwangcisiweyo ngokufanelekileyo, umzekelo, wethu owodwa uhlobo lwesifundo esipheleleyo seSpecial Multipurpose WordPress. Kwakhona, unokufumana izifundo ezinobungcali kunye nezikhangayo ezivela kwi-WordPress.org okanye abathengisi, umzekelo, i-Themeforest ne-Elegant Themes.
Emva koko, unokwakha isicatshulwa sakho kwisiqephu usebenzisa i-WordPress yekhasi lokuqala, onokwenza umzekelo, i-Visual Composer okanye iBeverver Builder ukusho nje nje isibini. Ngokufanayo unokusebenzisa izifundo ezincinci ezincinane ezihamba kunye neenkqubo zeendaba ze-WordPress, umzekelo, iGenesis okanye i-Thesis.
Ngethuba lokuba akukho nto ngaphandle kokuba kukho ezinye iindlela ezikhethiweyo ezibandakanyekayo, kwaye unayo imali yokugcina, cinga ngokuthenga njengomqambi omkhulu we-WordPress ukukuchonga ngokuchanekileyo into oyifunayo (khumbulani nje oku kudla ngokukhethileyo kunye nokukhetha neentloni zokucinga indlela yokuzibhala ngayo).
Ngelixa uhlaziya isayithi lakho, cinga ngokubandakanya njengokuqinisekiswa kwentlalo; inani labalandeli, abalandeli, abanokubonga - nantoni na exelela umthengi nabanye abantu bakuxabise izinto zakho. Kwimeko apho ungenamanani amaninzi okwamanje, cinga ukulibala ukuqinisekiswa kwezenhlalakahle kude kube ngenye indlela njengamaxabiso aphantsi angadla abantu abathembekileyo kubathengi, nangona kunjalo nje ukuba ulula.
Ukuphucula amaphepha akho okubingelelana nawo usebenzisa ukuhlolwa kwe-A / B kunye nokuhlolwa kweziyobisi. Enye into ongathanda ukuyifumelana nayo ibandakanya i-CTA ibamba indawo ecacileyo kunye ebonakalayo yamaphepha akho okubulisa. Ubuninzi obuninzi kweentlobo ze-CTA kufuneka zanele; ngokukhawuleza kwinqanaba eliphambili, elinye kwindawo kunye neyokugqibela kwisiseko.
Sekunje kweli nqanaba lokufika kwezoshishino, yenza amaphepha okubulisa eqela lakho leentlobo zabathengi. Sebenzisa isicatshulwa esingavamile kwaye wongezelela ngokubambisa zonke iindawo zokufika ukuze ubandakanye ukuhlanganiswa kwabantu.
Ukubuyela kwi-site update, ukumodareyitha yindlela eya phambili, okanye njengoMaya Angelou (unokuthi uThixo aphumle umoya wakhe ngoxolo olungunaphakade) wathi, "Inkqubela yokuqhubela phambili iyinzame."
Ngaba ufuna ukwenza isityebi nesicatshukisayo esiza kufikelela kwiingxaki kwiidrawls? Ngelo xesha ufanele wenze ukuba kunzima kunzima kwaye kuninzi ngokuthe ngqo ukusetyenziswa kwesiza kwiwebhu. Qala ngokulahla izinto ezingenanto ezingayixhasi okanye zizalise imfuno yakho.
Ngaphezulu kwelo, gcina umgama osisiseko kwiipopu zokukhusela nokukhushulwa. Ukongeza, qiniseka ukuba izibhengezo ozenzayo kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress zibalulekile kwizinto zakho kunye nezinto ezizodwa. Beka ukukhushulwa okubalulekileyo kwinqanaba le-sidebar, kwaye kwimeko apho unako, ugcine umgama osisiseko kumboniso wokuzimela kunye nezikhangiso ezivakalayo.
Kwinqanaba xa kuthethwa konke kwaye kwenziwe, qinisekisa ukuba indawo yakho iyayiphendula ukwenzela ukuba ingqalelo kwii-desktop kunye nabathengi abathintekayo. Khetha i-WordPress yesifundo, (umzekelo, i-Total) ukususela ekuqaleni. Isiqinisekiso ngokufanayo iimodyuli ozikhethayo ziphuculwe kwiifowuni.
Ngaba ufuna iimpumelelo zokudlulela iphepha lephepha? Ngelo xesha yenza kube lula kubo ukuba bafumane inani elikhulu lempahla yakho. Unako ukubeka ijejethi zeposenti ezihambelanayo ekupheleni kokungena kwebhulogi yakho okanye kwibar yebala lakho - qinisekisa ukuba ziyabonakala kubakho bakho. Iindaba eziphakamisayo akudingeki ukuba wenze umzamo ohloniphekileyo, kukho iimodyuli ze-WordPress ezinxulumene nazo ezingapheliyo ngoncedo nomsebenzi onzima ngokwenene.
Nangona le nto ayiyi kuphazamisa amanqanaba akho ekuhlaleni, ukubeka ibhulogi kunokunceda ukubandakanyeka kwabathengi kwixesha elide, elihlawula izinga lakho lokunciphisa. Xa ugcina abaxhasi bakho bebhengeza ngegalelo lebhulogi, abayi kukukholelwa ngakumbi, batyale amandla amaninzi kwiblogi yakho kwaye banikele abanye izinto.
Ngokuphathelele ukunika ithemba lakho into engafani nenye kwisayithi yakho - malunga nokujika kunye nokulindeleke ukuba kwintsimi yakho.
Xa ulungelelanisa isicwangciso sakho sengqondo, kunye nezinto zakho kunye nezinto, kwaye emva koko ugoqa yonke into ephakamileyo kwintetho yasezulwini, akukho nto ekukuthintela ekunciphiseni ixabiso lakho le-WordPress bounce rates.
Thatha emva kweengcebiso ezibekwe apha namhlanje, kwaye kufuneka ufumane isicatshulwa ukuba uhlanganyele, okanye umbuzo omele ungene kuyo, nceda unganqikazi ukusebenzisa le ndawo yangaphakathi. Siyakuthanda ukuva iingcinga zakho - hamba!